Ungayilindela kanjani imvula ngokuziphatha kwezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UClaudi Casal | | Izibikezelo
Uyobe uzwe kaningi izindlela ezithandwayo kakhulu kubantu zokuthi ungalindela kanjani imvula, njengephunga elibi elinikezwa amapayipi, indlu yakho yokugezela (yize leyo nkinga ingabangelwa ezinye izimo), kanye nezinye ezifana naleyo singaphawula manje, okuwukuthi izimpukane zivame ukunamathela kakhulu futhi kunzima ukuzisusa. Cha, akukhona ukuthi bazizwa bebodwa futhi ngokuzumayo bezwe ukukhanga okubulalayo ngakithi, konke lokhu kunencazelo yaso.
Izilwane eziningi zenze umuzwa wemvula ezayo, ikakhulukazi lezo izivunguvungu ezingababeka engozini ngokwanele. Okwakho, sizobuyekeza futhi sichaze ulwazi oluhlakaniphile abalimi abaningi abalufundile ngenxa yesidingo sokusondela kulo mkhuba wesimo sezulu, mayelana nokuziphatha okuhlukile kwezilwane ezithile:
2 Izinyoni ezingadli
6 Isibikezelo sembuzi
Uma bebhekene nemvula namakhaza, balahlekelwa amandla okuhamba. Ngalesi sizathu ngibabeka endaweni yokuqala. Isidleke, lapho ngaphakathi kwemvelo kufanele sihlale somile futhi izinga lokushisa elijwayelekile elilinganiselwa ku-36ºC, kubo yisiphephelo esihle kakhulu semvula.
Okuthile okubalulekile ukukusho ngezinyosi, njengezinambuzane eziningi emsebenzini wazo omkhulu (yebo, ukuthole, izimpukane kanjani!). Endabeni yezinyosi kuyacaca, phuthuma ukubuyela ekhekheni lezinyosi, izintuthwane zibuyela esidlekeni njll. Konke lokhu kuphithizela kungazinaki ezinye izilwane ezidla ezinye.
Asikho isikhathi esingcono sokuzibona zindiza ngaphezu kokujwayelekile kunangehora elithile ngaphambi kweziphepho. Uma noma yimuphi umfundi enethuba lokuyibona, qaphela uhlobo lwenyoni endizayo. Imvamisa impela isezingeni eliphansi, ngenkathi bazingela izinambuzane abangafuni ukuminza ngamanzi noma abangakwazi ukundizela phezulu. Lezi zinyoni, njenge- "flycatcher", zivame ukunyamalala ngaphambi kwemvula, ngoba nazo zigcina zikhosele.
Lapho usufunde ukusebenzisa le ndlela ehlaba umxhwele, ngenxa yokuthi ibukeka kangakanani futhi ibonakala inengqondo kangakanani, kuyilapho bambalwa abantu abonile, ungalindela imvula ngaphandle kwenkathazo enkulu. Kodwa akuzona zonke izinambuzane eziphithizelayo ngezizathu ezifanayo.
Yize kungabonakala kungafani nayo, izimpukane zinzima ngokwazo. Ngezikhathi zomswakama ophakeme, i-flap ngayinye inzima kakhulu kubo ukuthi bayigcine. Ngalesi sizathu, kulula ukudideka uma "besindwa" nokuthi "kuzokuna." Mhlawumbe kungukuthi sinenkomba yomswakama ephezulu kakhulu. Lapho zibuya "Heavy" kusuka emvuleniImvamisa kungenxa yengcindezi ephansi enikezwa umoya ngaphambi kwemvula. Kulezi zimo, zishaya umoya omncane kunokujwayelekile, yingakho zibenza bandizele phansi.
Ngakho-ke umvuthwandaba we ubunzima bayo ingcindezi yomoya ephansi, kanye nomoya onomswakama. Baphinde bagcwalise amaphiko abo we-hygroscopic, okwenza kube nzima ukwedlula okujwayelekile, ngisho nokwabo.
Sonke sizwile amaxoxo ekhala kaningi, kepha kuthiwani ukukhala okwenziwe ngaphambi kwesiphepho? Bese benza umsindo owehluke kakhulu futhi ohlukile kunowokujwayelekile, kuyindlela yabo yokuzwakalisa ukuphaphama. Uma, ngaphezu kwalokho, ukukhala kukukhulu, lokhu ngokufanayo kusho ubukhulu besiphepho. Ukuzwa lokho kukhakhaba okukhulu, hlala ubukele, ngoba isiphepho esinamandla kakhulu kunokujwayelekile singafika.
Uma usensimini, ungenasambulela, unezinkomo nxazonke bese ubona ukuthi zihlala phansi zonke, okokuqala izexwayiso, lina. Uma ungenaso isambulela, hlala uqaphela izimpawu ezichazwe ngenhla. Kepha uma futhi uyakubona lokho bazihlela ngakolunye uhlangothi lwensimu bebonkeYebo-ke, amathuba emvula anda kakhulu, gcina izinzwa zakho ziphapheme uma kungenzeka ngabe awubonanga okunye.
Ekugcineni bengifuna ukukhuluma ngezinhlobo zezilwane esingeke sikwazi ukuzithola lapha, kodwa ngifisa ukwazi kakhulu. Kukhona idolobha eMelika lapho isiteshi somsakazo sithi singabikezela imvula nokuthi uma izowa kakhulu noma kancane kuya ngezimbuzi ezihlala lapho.
Kuyabonakala ukuthi uma izimbuzi zisesiqongweni sentaba, abukho ubungozi bemvula. Uma bebona ukuthi izimbuzi sehle uhhafu wegquma, lizokuna, kepha hhayi ngokweqile. Nokho, bathi noma nini lapho lina kakhulu, zonke izimbuzi zehlela esigodini ukuzivikela.
Ukuzivumelanisa nezimo izilwane eziningi ezikulethela imvula kungaphezu kokumangala. Yinto esixakayo lapho sibhekene nokwehluleka kokukhula kwalowo mqondo noma ikhono. Kusimema ukuthi sicabange ukuthi ngabe sazi okuningi ngathi yini njengoba sicabanga ukuthi siyakwazi ukulawula.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ungayilindela kanjani imvula ngokuziphatha kwezilwane